“Cristiano Ronaldo ayaa ugu wacan jiilka iminka jira.”. Ferguson oo ammaan ugu qubeeyay CR7 – Gool FM
“Cristiano Ronaldo ayaa ugu wacan jiilka iminka jira.”. Ferguson oo ammaan ugu qubeeyay CR7
(England) 14 Luulyo 2016. Ronaldo ayaa ugu fiican jiilka iminkanka jira oo xitaa wuu ka sitaa xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or ee Lionel Messi waa sida uu qabo tababarihii hore ee Man United Sir Alex Ferguson.
Kabtanka xulka Portugal ayaa kula guuleystay xulkiisa koobkii ugu horreeyay ee wayn taariikhdooda kaddib markii ay Euro 2016 kaga guuleysteen xulka Faransiiska.
Xiddiga Real Madrid ayaa lix sano ka soo hoos shaqeynayay Ferguson markii uu ku sugnaa Man United halkaa uu kula soo guuleystay saddex jeer Premier League iyo waliba Champions League.
Inkastoo ay jirto in Ronaldo uu sanadka soo socda 32-jirsan doono ayuu misane Ferguson aaminsan yahay inuu yahay laacibka mid ka mid ah xiddigaha ugu wacan adduunka.
“Rabitaan aan innaba caadi ahayn ayuu u hayaa kubbada cagta, Cristiano tababarkasta ayuu farxad iyo xiiso ku sugaa. Had iyo jeer wuxuu doonayaa inuu sii fiicnaado, inuu guuleysto, wuxuu gaar ahaan u jecel yahay kulamadan waa wayn.
“Intii lagu guda jiray waqtigeygii Manchester, Ronaldo wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican ee sida ugu badana u hormaray. Wuxuuna ku hormaray shaqo adeeg badan wuxuu si joogta ah ugu tababaranayay xirfadiisa shuudadka/laadadka, lugta midig iyo bidix, awoodiisa madaxa, boodistiisa.
“Wuxuu leeyahay jir ciyaaro aan innaba caadi ahayn, hormarinta bandhigiisa waa cajiib.
“Waxa cajiibka ah waa in kubbada cagta maanta ay tahay mid jir ahaaneed iyo mid dhaqso ah.
“Sida caadiga ahna waxay siisaa ciyaartoyda kaliya shan ilaa lix sanadood inuu heerka sare ka ciyaaro, kaddib way dhamaataa.
“Cristiano wuxuu tani sameynayay in ka badan toban sano, waxayna ka dhigeysaa midaa mid gaar ah, jiil kasta wuxuu leeyahay ciyaaryahankooda u gaarka ah, Cristiano Ronaldo waa midka iminka.”.
Maxay ahaayeen saddexdii erey ee uu macallin Jose Mourinho ku sifeeyey saxiixa cusub ee Man United Zlatan Ibrahimovic?
Kooxda Real Madrid oo soo bandhigay maaliyadaha ay ku ciyaari doonto minin iyo marti xilli ciyaareedka 2016-17 + Sawirro